Njikọ Njikọ na Njikọ Njikọ site na Semalt ọkachamara Ivan Konovalov
ederede edetu: Ivan Konovalov bụ onye na-azụ ahịa ahịa na Semalt. Ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị puku ndị ahịa 10 000 ma na-aga n'ihu na teknụzụ kachasị mma.
Nchọpụta ọchụchọ na-eme ezigbo ọrụ nke ogo weebụsaịtị dị elu karị bụ nke dị oké ọnụ ahịa gaa na njụ-ajụjụ ọchụchọ nke onye ọbịa.
Dika kristin ọchụchọ nwere ike iziga dika pasent 60 nke okporo ụzọ n'efu gaa na saịtị gi, enweghi ihe mere i gaghi eji wuo njikọ gi na saịtị gi ma nwee obi uto a okporo ụzọ.
Isiokwu nke njikọ njikọ dị oke n'onwe ya, ị ga-amụ ya oge na ka ị na-anwale.
Otú ọ dị, enwere ụfọdụ ozi dị mkpa ka ị mụta ịmalite ma zere nsogbu ndị ọzọ.
Ihe Mere Owugwu Ji Dị Mkpa
Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ihe dịka friji, gịnị ka ị ga-eme n'ọnọdụ dị otú a?
Ị nwere ike ịchọta ụlọ ahịa ebe ị nwere ike ịzụta ngwaahịa ahụ, ma ọ bụ site na ndị ahịa na-anọghị n'ịntanetị ma ọ bụ ndị ahịa.
Nanị ohere ị ga-aga na ụlọ ahịa ma ịzụta friji n'ejighị onye ọ bụla maka nkwenye ha bụ mgbe ị maara otu esi eme mkpebi.
Ị ga-ahọrọ nhọrọ dabere na ahụmịhe gị, ihe ị chọrọ, ma ọ bụ site na nkwenye site n'aka enyi ma ọ bụ onye òtù ezinụlọ gị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-azụrụ friji maka oge mbụ ná ndụ gị, ma ịchọrọ ịme mkpebi doro anya, gịnị ka ị ga - eme? O yikarịrị ka ị ga-achọ ndụmọdụ sitere n'aka onye maara ihe na ịzụta friji. Ị ga-atụkwasị obi n'onye onye ahụ ma kpegharịa ya na ịzụrụ gị, nri?
Web Wide Web bụ nnukwu ebe. Mgbe engines na-achọ iji zaa ajụjụ onye ọbịa, ha na-elele weebụ maka nha nha. Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịnye otu ozi ahụ, ọ na-esiri ndị ọrụ ntanetị ike ịkwado saịtị kachasị elu na usoro nke nsonaazụ ọchụchọ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, njikọ enyemaka.
Ka anyị kwuo na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ na-aga ebe ị na-enye ọrụ na ịdenye tiketi na ụlọ na hotels dị iche iche gafere mba gị. Ugbu a, ọ bụrụ na ịnwe njikọ njikọ gị na saịtị gị site na ụfọdụ n'ime ụgbọelu ndị na-eduga ma ọ bụ hotels, ọ ga-erite uru na weebụsaịtị gị ma nyere gị aka inweta ọkwa dị elu na SERPs (Search Engine Results Pages) mgbe e jiri ya tụnyere saịtị ndị ọzọ yiri gi. Njikọ dị ka ntụkwasị obi..
Mgbe saịtị abụọ dị na ọdịnaya, onye na-enweta ọkwa dị elu bụ saịtị ahụ nke wuru ihe kachasị ntụkwasị obi na engines ọchụchọ .
Mgbe ị mepụta njikọ gaa na weebụsaịtị ndị ọzọ, ị na-ekerịta ahụmịhe na ntụkwasị obi n'etiti ibe gị n'ihe gbasara okwu gị. Njikọ njikọ engines na-ejikọta.
Inbound na Outbound Links
Njikọ na-abanye na njikọ ndị ahụ bụ ndị na-abata site na weebụsaịtị ndị ọzọ, ebe njikọ ndị si esi bịa na-ezo aka na ndị na-eziga onye si na website gị gaa na ebe nrụọrụ weebụ ọzọ.
Ntinye aka na-egosi etu ebe nrụọrụ weebụ ọzọ si tụkwasị gị obi na njikọ na-apụ apụ na-egosi oke ntụkwasị obi ị tinyere na saịtị ọzọ .
Ọdịmma dị mkpa mgbe nile maka ụmụ mmadụ, ọ bụkwa ihe nke engines na-achọ.
Nzube ha bụ igosi ihe kachasị mkpa ma dị mkpa nye ajụjụ onye ọrụ mgbe ị na-egbutu ata ma ọ bụ n'etiti ndị ụkọ.
Nke a pụtara na ha jide n'aka na ị na-enweta ihe ndị ziri ezi site na ebe ziri ezi n'oge niile.
Nke a bụ otu ihe dị mkpa nke na-enyere ndị na-ahụ maka engines aka ịchọpụta mma na ikwesị ntụkwasị obi nke weebụsaịtị.
Mgbe ị na-arụ njikọ na saịtị gị, ọ dị mkpa na ha si ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ebe dị elu .
Dịka enwere ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị agwụ agwụ na isiokwu e nyere maka ebe nrụọrụ weebụ gị iji jikọọ ma nweta njikọ na nloghachi, ma mesịa nweta ogo dị elu na ibe nsonaazụ ọchụchọ, ọ dị oké mkpa na njikọ ndị ahụ sitere na saịtị kachasị elu na a nyere ụdị.
Njikọ njikọta sitere na saịtị dị elu bụ ihe ịrịba ama na ebe nrụọrụ weebụ dị otú ahụ na-atụkwasị gị obi na njikọ ndị a na-abata na-agwa engines ọchụchọ ka ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike ịnwe ihe bara uru maka onye na-ere ya anya.
Nke a bụ ụdị nkwenye nke ị ga-achọ mgbe ịzụtara friji, dịka a tụlere n'elu.
Ị na-atụ aro naanị maka onye ọ bụla nke nwere ikike n'okwu ahụ Source .
Njikọ ndị ọzọ na-abata elu nke ị nwere ike ijikwa ịbanye na saịtị gị, mma gị ga-adị!